Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo dhex-dhaxaadin kawada Wanlla-Wayn – Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Senator Naciima Ibraahim Yuusuf ayaa muddo dhowr maalmood ah ku sugan degmada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelada Hoose waxayna halkaasi kawadaan kulamo lagu dhex-dhaxaadinayo beelo halkaasi ku dagaalamay.
Xubnahaan ayaa la kulmay Odayaasha dhaqanka ee degmada Wanlla-Wayn gaar ahaan dhinacyada dagaalamay, Maamulka degmada iyo kan Gobalka iyo Saraakiisha Ciidamada Soomaaliya ee halkaasi ku sugan. Sidoo kale waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee Bulshada degmada Wanlla-Wayn.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa Wareysi uu siiyay Kalfadhi waxa uu kaga hadlay waxa uu salka ku haayo Safarkooda iyo kulamadii ay la qaateen dadka degaanka iyo mas’uuliyiinta degmada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelada Hoose.
“Waxaan halkaan u nimid sidii aan u xalin laheyn dilal salka ku haaya Aanooyin iyo kala tabasho ay qabaan Beelo walaalo ah oo halkaasi dagan” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo Wareysi siiyay Kalfadhi.
“Waan ku guulaysanay inaa xalino waxa uuna hadda marayaa meel gaba-gabo ah, waxaanba dhihi karnaa waa dhamayney” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka. “Dhinacyadaan waa dad walaalo ah, hore dad ayey isaga dileen markii aan u nimid waan ka xalinay tabashadooda intii ugu badneed” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Dhinaca kale Senator Naciima Ibraahim Yuusuf iyo Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in ay booqdeen qaar kamid ah Xaafadaha magaalada Wanlla-Wayn ee Gobalka Shabeelada Hoose ayna ka war dooneen xaaladda dadka halkaasi dagan oo ay matalaan.
“Waxaan kulamo la qaadanay Odayaasha iyo Maamulka degmada waxaana iska Wareysanay xaaladda degaanka iyo dadka maanta halkaan dadka degan aan ku matalno siyaasadda iyo Dowladda” ayuu u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
“Shacabka Wanlla-Wayn waxay dhibka la qabaan Shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa Shabeelada Hoose, wixii dhib ah oo jirana waa nala-wadaageen” ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.